mujeer Zvita 31, 2017 0 Comments
Sei BITCOIN DEBIT CARD (CRYPTOPAY)
Gumiguru 25, 2017 0 Comments
Vazhinji vedu kushamisika kana ichi zvechokwadi kurarama imwe bitcoin debit kadhi uye ini zvakajeka vanogona kupindura kuti hungu. Saka kana iwe Wanna kuwana bitcoin debit pachako kadhi rako unofanira kunonyoresa nzvimbo iyi: CRYPTOPAY. Revavhoti iri nyore chaizvo ndinoziva unogona kuzviita pasina rubatsiro rwangu. Account 4 Currency Kamwe iwe vakabatana cryptopay uchaona munhoroondo yenyu 4 mari nhoroondo pamusoro dashboard yako. Bitcoin Nhoroondo Euro nhoroondo British paundi nhoroondo US Dollar nhoroondo Below ichi 4 mari nhoroondo iwe Read more [...]
mari, Featured, More, nhau
Siyana maserura vane vatyairi vavo USB rakasiyana vane kunoenderana. Pasina vatyairi izvi USB haugoni batanidza Mobile zvako P.C wako ndokusaka Zvakakunakirai yokugadza vatyairi USB kuti foni iri PC kana uchida kusika akwirwe. In ichi nyaya, Ndichakuratidzai munhu nyore chaizvo uye rakananga nzira kugoverana HTC USB mutyairi kuti mahwindo vanoshandisa zvisinei kana thry uri 32-ikakuruma, 64-ikakuruma mahwindo. DOWNLOAD uye dzishandise HTC USB mutyairi 32-ikakuruma / 64-ikakuruma Read more [...]